China kọmpụta sekit eletrọnịkị turnkey ọrụ multi-layer pcba nzukọ pcb emeputa ihe na ndị na-eweta ya. PhiliFast
Mmepụta PCB Kọmputa Mmepụta, SMT & THT ...
Turnkey PCB Assembly Electronic E Bipụtara PCB Circuit ...
RF microwave PCB nwere Flash Gold Surface finishing C ...
mgbanwe pcb 6 Layer fpc Mgbanwe-isiike PCB arụpụta ...
Pcb Multilayer PCB Prototype PCB PCB Manufacturer Cust ...
Omenala electronic circuit osisi turnkey ọrụ mult ...
ikanam PCB board aluminum circuit mbadamba na PCB manufac ...
PCBA ọrụ ngwá electronic emeputa nzukọ ebipụta ...
OEM PCB Mgbachi Assembly Circuit Board Manufacturi ...
Shenzhen ngwa ngwa- Speed ​​Turnkey PCB Assembly Electronic ...
Rogers PCB Shenzhen PCB emeputa Shenzhen Manufa ...
High Quality 4L FPC Flex PCB Board Mgbanwe E Bipụtara ...
OZI ỌMA CHINA 94V0 RIGID 8L HDI CONTROL ...
Multi-Layer Blue Solder nkpuchi Circuit Board Nlụpụta ...
SHENZHEN EGO dị elu FR4 ELECTRONIC CIRCUIT PCB MAN ...
FR4 94v0 Single-n'akụkụ ENIG sekit board PCB ngwa ngwa PR ...
Kọmpụta kọmpụta kọmpụta elektrọnik FR4 CARCUIT BOARD FAB ...
Omenala eletriki sekit osisi turnkey ọrụ multi-layer pcba nzukọ PCB emeputa
Nkọwapụta ngwaahịa ：
Base ihe: FR4-TG140 N'isi imecha: ENIG
Ọkpụrụkpụ PCB: Obosara 1.6mm Nkpuchi nkpuchi: Agba ndụ ndụ
PCB Size: 72*132mm Ihuenyo: Ọcha
Ọnụ Layer: 4/L Cu Ọkpụrụkpụ 35um (1 oz)
Chọpụtara na 2005. Site na ihe karịrị afọ iri nke mmepe na -aga n'ihu, ụlọ ọrụ ewebatala akụrụngwa nrụpụta kachasị elu, wee guzobe otu ndị ọrụ injinịa, chịkọtara ahụmịhe bara ụba nke mmepụta na njikwa n'oge mmepụta. Companylọ ọrụ anyị nwere sistemụ njikwa ogo zuru oke, usoro sistemụ ọkọnọ zuru oke, wee nweta nnukwu mmepụta. Ahịa ndị ahịa anyị na -ekpuchi ụwa niile, isi ngwaahịa na teknụzụ na -ebuga n'ahịa Europe na America. Ngwaahịa niile na -agbaso ụkpụrụ IPC na UL.
PHILIFAST na -enye ma PCB prototype na imepụta oke, na -akwado ọrụ EXPRESS. PCB anyị na-ekpuchi 1-32Otutu-PCB siri ike, Anyị nwekwara ike imepụta nnukwu ụlọ dị mgbagwoju anya, dịka PCB nke nwere ọtụtụ akwa, PCB ọla kọpa dị arọ, Rоgеrѕ na PCB tebụl kọmpụta kọmpụta, HDI bоаrdѕ, PCB Aluminium na PC Flex-Rigid PCB, mmepụta kwa ọnwa anyị agwụla. 20000m2, ngwaahịa anyị niile na -agbaso UL, CE, RoHS, ISO9001 ...
Ọkwa dị elu （IPCIII） PCB Nabatara
Ewezuga ọkọlọtọ IPCII PCB siri ike, na-agbanwe agbanwe, na-agbanwe agbanwe, bọọdụ HDI, Anyị nakwa gbasaa anyị Ike PCB na IPCIII Standard PCB, nke anabatara imepụta na itinye ya n'ọrụ Ndị agha, ụgbọala, Mediokwu ,:
Ruo 32 oyi akwa PCB
PHILIFAST Nlụpụta Otutu-akwa PCB bọọdụ ruo 32 oyi akwas, isi ihe gụnyere Fr4, Rogers, Arlon, Teflon, Taconic, Nelco, Isola, Ceramic, Metal core, Ect ..
Gwa ya n'ime awa iri na abụọ
PHILIFAST na -akwado ọrụ Express, enwere ike ịme ụdị PCB ngwa ngwa n'ime awa 12. Nkwado otutu usoro elu: HASL-LF, ENIG, plating gold, imikpu tin, silver imikpu, ENIPIG, OSP.
1, Ịhazi faịlụ PCB zuru oke (Gerber, BOM, họta na idobe faịlụ), gbaa mbọ hụ na faịlụ niile doro anya na -enweghị mmejọ ọ bụla.
2, Zipu faịlụ na email anyị: sales@fljpcb.com gwakwa m nke ị chọrọ ịtụ.
3, Ahịa anyị ga -akpọtụrụ gị n'ime awa 1 iji gosi ihe niile ị ga -ehota.
4, Ozugbo ekwenyela onyinye a, anyị ga -eziga akwụkwọ ọnụahịa proforma yana ozi akaụntụ ịkwụ ụgwọ gị ka ị lelee
5, Mgbe ị kwadoro PI, ị nwere ike izitere anyị PO ma anyị ga -eji akara ụlọ ọrụ anyị bịanye aka na ya wee nyochaghachi gị ya.
6, Hazie ịkwụ ụgwọ ma zitere anyị akwụkwọ ịkwụ ụgwọ ụlọ akụ.
7, Ndị otu injinia anyị ga -emeso faịlụ gị wee hazie gị usoro.
Nke gara aga: Mbadamba PCB osisi bọọdụ sekit na ndị nrụpụta pcb
Osote: PCB Multilayer PCB Prototype PCB PCB Manufacture Custom Multilayer Prototype Assembly Electronics PCB Nlụpụta
Ọla kọpa PCB
SHENZHEN EGO dị elu FR4 ELECTRONIC CIRCUIT PC ...